(8) - BookCubicle
အပိုငျး - ၈ : ငါက မငျးရဲ့ဖနျပါ!
“အာ… ငါ ဘယျလိုလုပျရမလဲ…”
ခနျ့ဝသေျောကိစ်စကို သူ ခေါငျးခဲနရေငျးကနေ ယှနျးခြီခပျတိုးတိုးလေးညညျးတယျ။ ခုတငျပျေါမှာ လူးလိမျ့နတေုနျးမှာ ဟနျနာ့ဆီက ဖုနျးဝငျလာလရေဲ့။
ဟနျနာ့ရဲ့အသံက အမွဲတမျးကွညျကွညျရှငျရှငျပဲ။ နောကျပွီး ဟနျနာက သိပျကို active ဖွဈတဲ့ ကောငျမလေးလညျးဖွဈတယျ။ တဈခါခါကရြငျး ဟနျနာက ဘာလို့မြား သိပျတကျကွှနိုငျလှနျးလဲဆိုတာကို ယှနျးခြီစဉျးစားလို့တောငျ မရဘူး။ ဟနျနာက တကျကွှတယျ။ ရဲရငျ့တယျ။ ပွီးတော့စှာတယျ။
အိုး… ဟုတျတယျ… ဟနျနာက စှာတယျ… ယှနျးအနနေဲ့ သူ Photo Model စလုပျတုနျးကဆိုရငျ bad comment တှအေမြားကွီးပဲရခဲ့တယျ။ ယှနျးက ဘယျလောကျပဲ လှလှ Hater ကတော့ ရှိတာပဲလေ။ သူတို့အကုနျလုံးက ဟနျနာ့ရဲ့ အညှာအတာမရှိတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့တှသှေ့ားခဲ့တယျ။ ဘယျလိုနညျးလမျးဆိုတာကို သူ ပွောတောငျမပွောခငျြဘူး။
Hater တှေ… ဒါကလညျး လူ့သဘာဝပါပဲ။ လူတှကေ သူတို့မှာမရှိတဲ့အရာကို တဈဖကျသူက ပိုငျဆိုငျရငျ ကျောပီကူးခွငျးနဲ့မုနျးတီးခွငျး နှဈမြိုးတညျးကိုပဲ လုပျလရှေိ့တယျ။
ကျောပီကူးတာကိုကြ သူတို့က စကားလှအောငျ လှမျးမိုးခံရတာလို့သုံးနှုနျးပွီးတော့ မုနျးတီးတာနဲ့ပတျသကျပွီးကိုတော့ နညျးလမျးတှအေမြိုးမြိုးနဲ့ဖျောပွတတျကွတယျ။
နညျးလမျးနှဈ။ သူက ငါ့လောကျမတတျပါဘူးလို့ဖောငျးထုမယျ။
ဘယျနညျးလမျးပဲဖွဈဖွဈပါ။ ယှနျးခြီဆိုတဲ့ကောငျကလေးက အကုနျလုံးကို ရငျဆိုငျခဲ့ပွီးသှားပါပွီ။ အငျး ဟနျနာအတူတူရှိလို့ပေါ့။
ဟနျနာက လူရညျလညျတယျ။ ဒါကလညျး ဟနျနာက လူတှအေမြားကွီးနဲ့ပေါငျးသငျးဆကျဆံဖူးတာလညျး ပါမှာပေါ့။ ဟနျနာက သူ့ကိုအမွဲတမျးအကာအကှယျပေးတယျ။ အဲ့လိုမကောငျးတဲ့လူတှဆေီကပေါ့။ တကယျတော့ သူက အဈကို ဖွဈတာကွောငျ့ ညီမဝမျးကှဲလေးကို တခွားသူတှဆေီက ကာကှယျပေးရမယျဆိုပမေဲ့ ဟနျနာကခညျြး သူ့ကိုကာကှယျပေးတာပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ရှကျလားလို့မေးရငျတော့ သူ မရှကျပါဘူး။ လုံးဝ(လုံးဝ) မရှကျဘူး!
ဟုတျတယျလေ။ သူ မတတျနိုငျတာကို သူမြားတတျနိုငျလို့လုပျပေးတာပဲ။ ဘာရှကျစရာရှိလဲ။ ကြေးဇူးတငျလိုကျရုံပေါ့။ ဒါဆိုဘယျလောကျမြားကောငျးသှားလိမျ့မလဲ။ တဈခါခါမှာ လူတှကေ အခွခေံအခကျြဖွဈတဲ့ ကြေးဇူးတငျခွငျးဆိုတာကို မလြေ့ော့ကွတယျ။ ဒါကလညျး သူတို့အပွဈတော့မဆိုသာပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မာနက ကြေးဇူးတငျခွငျးကို မလြေ့ော့အောငျ လုပျခဲ့တာကိုး။ ဒါကွောငျ့ သူ မလုပျနိုငျတာကို ဟနျနာလုပျပေးတဲ့အခြိနျမှာ ဘာဘာညာညာ သူ မစဉျးစားဖွဈဘူး။ ကြေးဇူးပဲတငျဖွဈလိုကျတယျ။
“ငါ Dress အသဈခြုပျပွီးသှားပွီ… အလုပျစကွမယျ… ဒီပိတျရကျမှာ…”
ယှနျးခြီရဲ့မကျြနှာမှာ မမွငျရတဲ့အနကျစငျးတှထေငျလာတော့တယျ။ သူ မိနျးကလေးလို ထပျဝတျရဦးမယျ။ ဘာလို့မြား သူ့အမကေသူ့ကို ဘာဝတျစုံဝတျဝတျလှတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပေးခဲ့တာလဲ။ နောကျပွီး ယောကျြားမကြ မိနျးမ မကတြဲ့မကျြနှာကိုလညျး ပေးထားသေးတယျ။
ယှနျးခြီခပျအေးအေးပဲ ‘အငျး’ လိုကျတယျ။ ဒီအလုပျက သူနဲ့အသားကနြပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ သူ့စိတျထဲ မိနျးကလေးလို ဝတျရမယျဆိုတာကို တှေးမိပွီး နညျးနညျး အောငျ့သကျသကျဖွဈတာကလှဲရငျ သိပျတော့ ထူးထှမေခံစားရတော့ပါဘူး။
အန်တရာယျမြားလိုကျတာ! သူ မိနျးကလေးလို ဝတျတာနဲ့ပတျသကျပွီး နညျးနညျးလေးမှ ကသိကအောကျ မခံစားရတော့ဘူး! ဒါ အရမျးကို အန်တရာယျမြားတာပဲ!
ဟနျနာနဲ့သူနဲ့ ရောကျတတျရာရာပေါကျတတျရာရာပွောရငျးကနေ ဟနျနာက အကွောငျးအရာတဈခုခုကို သတိရသှားတဲ့ပုံနဲ့အသံပွုတယျ။ ပွီးတော့မှ…
“အိုး… အဈကို… နငျ သူငယျခငျြးအသဈရနတေယျဆို… အနျတီပွောတာ…”
သူငယျခငျြးအသဈဆိုတာက ယှနျးခြီရငျကို တဒိတျဒိတျခုနျသှားစတေယျ။ သူငယျခငျြးအသဈ…
“အဲ့ဒီကောငျလေးက နငျ့ကိုအနိုငျကငျြ့မှာကို သူ စိုးရိမျတယျလို့ပွောနတော…”
ယှနျးခြီရဲ့မိဘတှကေ ခနျ့ဝသေျောနဲ့သူ အပေါငျးအသငျးလုပျနတောကို သိပုံရတယျ။ မွို့လေးကလညျး ခပျကဉျြးကဉျြးဖွဈတာကွောငျ့ လူကွီးတှအေနနေဲ့ ရှိတဲ့ကလေးနညျးနညျးလေးရဲ့ အကွောငျးတှကေို သိဖို့ဆိုတာ သိပျတော့ မခဲယဉျးလှပါဘူး။
“သွျော… အဲ့ဒါဆိုလညျးပွီးတာပဲ ကိစ်စမရှိပါဘူး သူ အနိုငျကငျြ့ရငျတော့ ငါ့ကိုပွောနျော…”
“ငါတို့ကြောငျးက ငါ့ကိုကွိုကျနတေဲ့ကောငျလေးတှအေကုနျလုံးကို ချေါပွီး အဲ့ကောငျကိုထိုးခိုငျးမယျ… အနာဆုံး ထိုးနိုငျတဲ့ကောငျကို ငါနဲ့ကြောငျးပိတျရကျတဈရကျ ဒိတျခှငျ့ပေးလိုကျမယျလေ…”
ယှနျးခြီရုတျတရကျ ဘာပွောရမှနျးမသိတော့ဘူး။ သူ့ညီမတဈယောကျဟာ ကိုယျတိုငျမလုပျနိုငျတဲ့ကိစ်စကို အခွားသူတဈယောကျကို အသုံးခဖြို့အတှကျ အကွံအကွီးကွီးရှိနတေယျ။
“ဘာလဲ ငါမှ ရနျမဖွဈတတျတဲ့ဟာ…”
ဟနျနာရဲ့ဖုနျးထဲက ဆောငျ့ဆောငျ့လေးထှကျလာတဲ့အသံက တဈဖကျမှ သူ့နှုတျခမျးတှကေ ရှကေို့ စုခြှနျပွီဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါပဲ။
“ကိုယျမလုပျနိုငျလို့ လုပျနိုငျတဲ့လူကို အသုံးခတြာ ဘာဖွဈတာမှတျ…”
“ကောငျလေးတှနေဲ့ မပတျသကျပါနဲ့ နငျက ငယျငယျလေးရှိသေးတာ…”
၁၅ နှဈဆိုတာ ငယျငယျလေးပါ။ တကယျငယျငယျလေး။
“အမလေး မပတျသကျပါဘူး… ငါ ဘယျသူနဲ့မှ ဒိတျဖို့မစဉျးစားဘူး…”
ဟနျနာက ခပျမွနျမွနျအျောတယျ။ နောကျတော့ သူမလေးက ဆကျပွောလာတယျ။
“ဘာပဲဖွဈဖွဈ… သူက လူရမျးကားလေးလို့ အနျတီကပွောတယျ… အဲ့ဒါကွောငျ့ နငျ အဲ့ဒီလူရမျးကားလေးနဲ့ ဆကျပေါငျးသငျးမယျဆိုရငျ အဈကိုကွီး နငျ Roll No. တော့ ကလြို့မဖွဈဘူး…”
သူ့အဈကိုကွီးမှာ အပေါငျးအသငျးက မြားမြားစားစားမရှိတာကွောငျ့ ဟနျနာကတော့ ယှနျးခြီအမလေိုမြိုး ယှနျးခြီကို ဟိုလူနဲ့မပေါငျးနဲ့ဒီလူနဲ့မပေါငျးနဲ့တော့ မပွောခငျြဘူး။ ဘာလို့ဆို ယှနျးခြီမှာ ယောကျြားလေးအပေါငျးအသငျးထကျ မိနျးကလေးအပေါငျးအသငျးက ပိုမြားတယျလေ။ ပွောရရငျ အဲ့လူရမျးကားလေးက လတျတလောမှာရှိတဲ့ ယှနျးခြီရဲ့ တဈယောကျတညျးသော ယောကျြားလေး အပေါငျးအသငျးလို့တောငျပွောလို့ရတယျ။ နောကျပွီး လူရမျးကားလညျး ဘာဖွဈလဲ။ လူရမျးကားမှာလညျး အသုံးဝငျတဲ့အခကျြတှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ အဲ့ဒီလူရမျးကားလေးက ရပျကှကျဗိုလျမြိုးဆို ဘယျကောငျမှ ကိုယျ့မထိရဲတော့ဘူးလေ။ ဟငျး…ဟငျး ပွောပါတယျ အသုံးဝငျပါတယျဆို။ ဟနျနာ ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ စိတျထဲမှာ ကွိတျရယျလိုကျတယျ။
“အငျး ငါ သိတယျ…”
ယှနျးခြီက လပြေော့လေးနဲ့ပဲပွနျပွောတယျ။ ဟုတျတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့မိဘတှကေ ယှနျးခြီကို တျောတနျရုံမခြုပျခယျြကွဘူး။ ယှနျးခြီရဲ့ အဆငျ့သာမကဘြူးဆိုရငျ သူတို့ဘာမှပွောမှာမဟုတျဘူး။ ဟနျနာက သူ့ကို ဒါကို သတိရအောငျ ပွောပေးနတော။ ဟနျနာတဈယောကျ သူ့ဘေးမှာရှိတာ ကြေးဇူးတော့တငျရမယျ။ မဟုတျရငျ သူ ဘယျလိုမှ ဒီလိုအခကျြတှကေို သတိထားမိမှာ မဟုတျဘူးလေ။
ပွောပွီးတာနဲ့ ဟနျနာက နောကျထပျခေါငျးစဉျတဈခုထပျပွောငျးတယျ။
“ငါဒီတဈခါရိုကျကှငျးကို လိုကျအောငျ ပွောငျးထားတယျ…”
“အခု ဂါဝနျက gothic style ဆိုတော့ နငျနဲ့လိုကျမှာပါ… နငျ့ညှပျရိုးလေးတှကေ တအားလှတယျလေ…”
ဟနျနာနဲ့သူနဲ့ ဆကျပွောကွတယျ။ အမွဲတမျး ယှနျးက နတျသမီးဆနျဆနျဖွူဖွူလေးလှနတောကို visual change ပွီး အပွောငျးအလဲဖွဈအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ဟနျနာက အားတကျသရောပွောပွတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ နားထောငျသကျသကျပေါ့။ သူက ဘိုမရုပျလေးပဲလုပျမယျ။ ဟနျနာဝတျပေးတာဝတျမယျ။ ဟနျနာ နခေိုငျးသလိုနမေယျ။ ဟနျနာပွငျပေးတာကို ငွိမျခံမယျ။ ဟနျနာက အဲ့ဒီပိုငျးမှာ ငယျပမေဲ့ talent ရှိတယျဆိုတာ သူ ကောငျးကောငျးသိတယျလေ။ ဒါကွောငျ့ သူ ဟနျနာ့ကို ယုံလိုကျတာပဲ ကောငျးတယျ။
“ဒါဆို ငါတို့ ပိတျရကျ ၁၀ နာရီနျော…”
နောကျဆုံးတော့ ခြိနျးဆိုမှုကွီးက အတညျဖွဈသှားခဲ့တယျ။ ဟနျနာနဲ့ဖုနျးပွောပွီးခြိနျမှာ ယှနျးခြီရဲ့အတှေးတှကေ တောငျရောကျမွောကျရောကျပေါ့။ ပထမဆုံး ခနျ့ဝသေျောနဲ့ကိစ်စတှရှေုပျနခေဲ့တာကွောငျ့ သူက ယှနျးဆိုတာကို ယှနျးခြီမနေ့ခေဲ့တယျ။ အခုတော့ သူ အဲ့ဒီအလုပျကို လုပျရဦးမယျ။ သူက ယှနျးဆိုမှ… ခနျ့ဝသေျောက သူနဲ့တှဲရငျ တိတျတိတျလေးနပေေးမယျလို့ပွောတယျ။
ဒါက ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကိုခဈြတာလား မခဈြတာလား။ ခဈြတာလားမခဈြတာလားဆိုတာကလညျး ပါးစပျကပွောမှ သိမှာပေါ့မဟုတျဘူးလား။ သူက အကွားအမွငျဆရာလညျးမဟုတျ၊ စိတျဖတျသူလညျးမဟုတျဘူးလေ။
ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကိုခဈြတာလား၊ မခဈြတာလားဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျမှာ ယှနျးခြီတဈယောကျ စိတျဓာတျကနြတေဲ့ အုနျးမှုတျခှကျလေးပွနျဖွဈသှားတော့တယျ။ သူ တကယျမသိဘူး ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကိုခဈြတာလား၊ မခဈြတာလား။ စိတျဆိုးလို့ သူနဲ့တှဲပွီး သူ့က ယောကျြားတဈယောကျပါလို့ အရှကျခှဲမှာလား။
ဒီအတှေးက ယှနျးခြီရဲ့တဈကိုယျလုံးကို အေးစကျတောငျ့တငျးသှားစတေယျ။
မဟုတျလောကျပါဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက အဲ့လိုမြိုးလုပျမဲ့လူမဟုတျပါဘူး။
ခနျ့ဝသေျောက လုံးဝလုပျမှာမဟုတျပါဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက… ခနျ့ဝသေျောက လူကောငျးလေးဆိုတာကို သူ သိတာကွောငျ့ မလုပျလောကျပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီညကတဈညလုံး ယှနျးခြီတဈယောကျ Repeat ပွနျလှနျနတေဲ့ မေးခှနျးနဲ့ အိပျပကျြခဲ့ရတယျ။
တဈရကျလေးအိပျပကျြလိုကျတာနဲ့ မကျြတှငျးလေးခြိုငျ့လာတဲ့ ယှနျးခြီရဲ့ပုံကိုကွညျ့ပွီး ခနျ့ဝသေျော အံ့သွတကွီးမေးတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အယောငျမကသြေးတဲ့မကျြနှာကိုကွညျ့ပွီးတော့…
“ဘာလို့ အဲ့လောကျကွီး ရနျဖွဈလာရတာလဲ…”
ခနျ့ဝသေျောအခုလိုဒဏျရာရနတောကို မွငျရတာ သူ့စိတျက လုံးလုံးမခမျြးသာဘူး။ ခနျ့ဝသေျောနာတာက သူ နာတာမဟုတျပမေဲ့ သူနာသလိုပဲ ခံစားနရေတယျ။ လူကနာတာမဟုတျဘဲ စိတျကနာတာကွောငျ့ သူခံစားရတာက ပိုဆိုးလောကျတယျလို့ ယှနျးခြီထငျတယျ။
“သွျော… မနာပါဘူး… လကျတှပွေ့လို့ရတယျ…”
ခနျ့ဝသေျောက သူ့မနကျစာ ပေါငျမုနျ့ကိုကိုကျပွီးတော့ ယှနျးခြီလကျကို ကောကျဆှဲလိုကျတယျ။ ရုတျတရကျအပွုအမူက ယှနျးခြီကို မကျြလုံးတှဝေိုငျးစကျသှားစတောပေါ့။ ယောငျကိုငျးနတေဲ့မကျြနှာကို ယှနျးခြီလကျခြောငျးသှယျသှယျလေးတှေ ထိလာတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီမကျြလုံးတှကေို စိုကျကွညျ့တယျ။ နောကျတော့ ပေါငျမုနျ့ကို ကိုကျထားရငျးကနေ ပွုံးတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အဲ့လိုအပွုံးက ခှေးလေးတဈကောငျက မုနျ့အိတျလေးကိုကျပွီး ပွုံးလိုကျသလိုပဲ။ ယှနျးခြီကတော့ အဲ့လိုပဲ မွငျတယျ။ ပှနျးခြိကို မွငျယောငျလိုကျတာကွောငျ့ ယှနျးခြီရဲ့လကျတှကေ ခနျ့ဝသေျောလကျကနထှေကျပွီး အလိုလို ခနျ့ဝသေျောခေါငျးဆီရောကျသှားတယျ။ ဒါ ပှနျးခြိကို အသဲယားလာတိုငျး သူ လုပျတတျတဲ့ အပွုအမူပါပဲ။
“နောကျတဈခါ ရနျအမြားကွီး မဖွဈနဲ့…”
ယှနျးခြီရဲ့အသံတိုးတိုးလေးက ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ရငျထဲကို ခြောကလကျကျောဖီပူပူလေး လောငျးထညျ့လိုကျသလိုပါပဲ။ နှေးလညျးနှေးတယျ။ ခြိုလညျးခြိုတယျ။
ပေါငျမုနျ့ကိုကျရငျးနဲ့ သူ ခေါငျးညိတျတယျ။ ပေါငျမုနျ့ကိုကျထားတာကွောငျ့ သူ့ ‘အငျး’ ဆိုတဲ့အသံက မပီမသနဲ့ပေါ့။
အာ… သူ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ပါးတှကေို ဆှဲညှဈခငျြလိုကျတာ… ယှနျးခြီစိတျထဲမှာ တှေးနတေယျ။ လကျတှမှေ့ာတော့ ခနျ့ဝသေျော ဆံပငျထောငျထောငျလေးတှကေို ထိပွီးတော့ သူ လကျမွနျမွနျရုတျလိုကျရတယျ။ တျောသေးတယျ! ခနျ့ဝသေျောက ငါ့ကို ထမထိုးလို့!
ယှနျးခြီစိတျထဲရငျမနပွေနျတယျ။ ဟုတျတယျလေ။ သူ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ခေါငျးကို ဖတျခနဲမပွောမဆိုနဲ့ကိုငျလိုကျတာကို။ မကျြထောငျ့လေးကပျပွီး ခနျ့ဝသေျော စိတျဆိုးနလေား မဆိုးနလေား အကဲခတျပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောက ခပျအေးအေး ပေါငျမုနျ့စားနလေရေဲ့။
“မနကျစာကို ငါ လုပျလာပေးရမလား…”
ယှနျးခြီတိုးတိုးလေးမေးတယျ။ ပေါငျမုနျ့တှေ နတေို့ငျးစားတာ မကောငျးဘူးလေ။
“မငျး စားခငျြတယျဆို ငါ နလေ့ညျစာပါ နှဈယောကျစာ လုပျလို့ရတယျ…”
ခနျ့ဝသေျော ပေါငျမုနျ့သီးသှားတော့တယျ။ သူ မွိုခနြတေုနျးမှာ ယှနျးခြီပွောလိုကျတာကွောငျ့လေ။ အရမျးကိုအံ့သွသှားတာကွောငျ့ ပေါငျမုနျ့က သူ့လညျခြောငျးမှာတဈသှားခဲ့တယျ။ ပွနျမဖွတောကွောငျ့ ယှနျးခြီကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ ခနျ့ဝသေျောရဲ့မကျြနှာနီနီကိုတှတေ့ယျ။ ရှကျလို့နီတာထကျ ပေါငျမုနျ့က လညျခြောငျးမှာ တဈနလေို့ နီနတောပါ။ ရငျဘတျထုနတေဲ့ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့ပွီး ယှနျးခြီ ဘာဖွဈနတေယျဆိုတာကို နားလညျလိုကျတယျ။
ခပျမွနျမွနျပဲ ခနျ့ဝသေျော သူ့အတှကျဝယျလာပေးတဲ့ စတျောဘယျရီနို့အေးစက်ကူဘူးကို သူ ပိုကျနဲ့ဖောကျပွီး တိုကျလိုကျတယျ။ အအေးဝငျသှားတော့မှပဲ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ နီနတေဲ့ မကျြနှာက အရောငျကသြှားတော့တယျ။
“မငျး မလုပျစခေငျြလညျး ပွောလို့ရပါတယျ… အဲ့လောကျ လနျ့သှားစရာမလိုပါဘူး…”
အအေးဆကျသောကျနတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို မကွညျ့ဘဲ ယှနျးခြီစိတျမကောငျးဖွဈစှာနဲ့ပွောတယျ။
ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ အအေးတောငျ မမွိုခနြိုငျတော့ဘူး။ အလောတကွီးပွနျပွောလိုကျတာကွောငျ့ ပါးစပျထဲက အအေးတှကေ သူ့ပေါငျပျေါကသြှားတော့တယျ။
ခနျ့ဝသေျော : ………
ယှနျးခြီ : ………
သူတို့ တခဏတိတျသှားကွတယျ။ ကသောငျးကနငျးဖွဈနတေဲ့ သူတို့ရဲ့အဖွဈကိုကွညျ့ပွီး တဟားဟားနဲ့ထရယျကွတော့တာပေါ့။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို ကွညျ့ပွီးတော့…
“တကယျတော့ ငါအရမျးပြျောသှားတာပါ မငျးက ငါ့ကို မနကျစာလုပျပေးမှာလေ…”
ရယျပွီးခဏကွာတဲ့အခြိနျမှာ ခနျ့ဝသေျောပွောတယျ။ ယှနျးခြီကို သူ ကွညျ့တဲ့အကွညျ့က ရှနျးရှနျးစားစားပါပဲ။ ယှနျးခြီ ခေါငျးလေးငုံ့သှားခဲ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျော စိတျထဲမှာ မခငျြ့မရဲနဲ့။ ဒုက်ခပဲ ခေါငျးငုံ့နတေဲ့ ယှနျးခြီကို သူ ဖကျလိုကျခငျြတယျ။ နောကျပွီးတော့ သူ နမျးလိုကျခငျြတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ လုပျလို့မရဘူး! ဒါက ကြောငျးပရဝဏျထဲမှာလေ! လုပျလိုကျရငျ သူ့ဦးလေးက သူ့ကို အသလေုပျသတျလိမျ့မယျ!
“ငါတို့ ဒီပိတျရကျ ရုပျရှငျသှားကွညျ့ကွမလား…”
ခနျ့ဝသေျော တိုးတိုးလေးမေးတယျ။ တကယျလို့ ရုပျရှငျကွညျ့မယျဆိုရငျ ယှနျးခြီရဲ့လကျတှကေို သူကိုငျလို့ရလောကျတယျ။ နောကျပွီး အခှငျ့အရေးပေးရငျ ပခုံးလေးဖကျမယျ။ အခှငျ့အရေးထပျပေးလာရငျ… ယှနျးခြီကို သူ နမျးခငျြတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ လကျကလေးတှကေ အိအိလေး။ ပခုံးကိုသာ ဖကျပွီး သူ့ရငျခှငျထဲထညျ့ရငျ ယှနျးခြီဆီက ဘယျလိုအနံ့မြိုးကို သူ ရလိမျ့မလဲ။ ယှနျးခြီသုံးနကြေ ရမှေေးနံ့? ယှနျးခြီရဲ့ နှုတျခမျးလေးတှကေရော အိစကျနမေလား ဒါမှမဟုတျ ဘယျလိုအရသာမြိုးရှိလိမျ့မလဲ… လူဆိုးလေးတဈယောကျက သူ့အတှေးနဲ့သူ မကျြနှာလေးရဲသှားတယျ။
ယှနျးခြီကတော့ လူဆိုးလေးတဈယောကျရဲ့ အတှေးကို မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ့စိတျထဲ ပိတျရကျမှာ ဟနျနာနဲ့ကတိပေးထားတာကို တှေးနတေယျ။
“ငါ အဲ့နေ့ ဓာတျပုံရိုကျကှငျးရှိတယျ…”
ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အသံက မြှျောလငျ့တကွီးပေါ့…
“ငါ လိုကျကွညျ့လို့ရမလား… ငါက မငျးရဲ့ဖနျပါ! မငျးက ငါ့ရဲ့ နံပတျတဈပဲ!”
ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မကျြနှာလေးက ပှနျးခြိအစာတောငျးနတေဲ့ပုံလေးနဲ့တူတယျ။ ခနျ့ဝသေျောခေါငျးပျေါမှာ နားရှကျနဲ့ အနောကျက အမွီးတောငျ ထှကျလာသလိုပဲ။ အမွီးလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ ပှနျးခြိအစာတောငျးနတေဲ့ပုံကို မွငျယောငျပွီး ယှနျးခြီရယျတော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို အရှကျခှဲမယျ? ဘယျလိုတှတေောငျ သူ အတှေးတိမျခဲ့တာလဲ။
သူ ရယျပွီးခေါငျးညိတျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ဘယျတော့မှ လုပျလိမျ့မှာမဟုတျပါဘူး။ သူ ဒါကိုကောငျးကောငျးသိတယျ။ သူ ယုံလညျးယုံတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ ယှနျးခြီဘာလို့ ရယျလညျး နားမလညျဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး ယှနျးခြီရယျနတောကိုပဲ သူ ကွညျ့နလေိုကျတယျ။ ရယျနတေဲ့ယှနျးခြီကို သူ သဘောကတြယျ။ ဟငျ့အငျး ယှနျးခြီ ဘယျလိုနနေေ သူ သဘောကတြာပါ။ ဟုတျတယျ အမှနျက ဒီလိုပါ။ ယှနျးခြီဘယျလိုနနေေ သူ သဘောကတြာ။
အပိုင်း - ၈ : ငါက မင်းရဲ့ဖန်ပါ!
“အာ… ငါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…”
ခန့်ဝေသော်ကိစ္စကို သူ ခေါင်းခဲနေရင်းကနေ ယွန်းချီခပ်တိုးတိုးလေးညည်းတယ်။ ခုတင်ပေါ်မှာ လူးလိမ့်နေတုန်းမှာ ဟန်နာ့ဆီက ဖုန်းဝင်လာလေရဲ့။
ဟန်နာ့ရဲ့အသံက အမြဲတမ်းကြည်ကြည်ရွှင်ရွှင်ပဲ။ နောက်ပြီး ဟန်နာက သိပ်ကို active ဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးလည်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခါခါကျရင်း ဟန်နာက ဘာလို့များ သိပ်တက်ကြွနိုင်လွန်းလဲဆိုတာကို ယွန်းချီစဉ်းစားလို့တောင် မရဘူး။ ဟန်နာက တက်ကြွတယ်။ ရဲရင့်တယ်။ ပြီးတော့စွာတယ်။
အိုး… ဟုတ်တယ်… ဟန်နာက စွာတယ်… ယွန်းအနေနဲ့ သူ Photo Model စလုပ်တုန်းကဆိုရင် bad comment တွေအများကြီးပဲရခဲ့တယ်။ ယွန်းက ဘယ်လောက်ပဲ လှလှ Hater ကတော့ ရှိတာပဲလေ။ သူတို့အကုန်လုံးက ဟန်နာ့ရဲ့ အညှာအတာမရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တွေ့သွားခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းဆိုတာကို သူ ပြောတောင်မပြောချင်ဘူး။
Hater တွေ… ဒါကလည်း လူ့သဘာဝပါပဲ။ လူတွေက သူတို့မှာမရှိတဲ့အရာကို တစ်ဖက်သူက ပိုင်ဆိုင်ရင် ကော်ပီကူးခြင်းနဲ့မုန်းတီးခြင်း နှစ်မျိုးတည်းကိုပဲ လုပ်လေ့ရှိတယ်။
ကော်ပီကူးတာကိုကျ သူတို့က စကားလှအောင် လွှမ်းမိုးခံရတာလို့သုံးနှုန်းပြီးတော့ မုန်းတီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတော့ နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြတတ်ကြတယ်။
နည်းလမ်းနှစ်။ သူက ငါ့လောက်မတတ်ပါဘူးလို့ဖောင်းထုမယ်။
ဘယ်နည်းလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ယွန်းချီဆိုတဲ့ကောင်ကလေးက အကုန်လုံးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီ။ အင်း ဟန်နာအတူတူရှိလို့ပေါ့။
ဟန်နာက လူရည်လည်တယ်။ ဒါကလည်း ဟန်နာက လူတွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖူးတာလည်း ပါမှာပေါ့။ ဟန်နာက သူ့ကိုအမြဲတမ်းအကာအကွယ်ပေးတယ်။ အဲ့လိုမကောင်းတဲ့လူတွေဆီကပေါ့။ တကယ်တော့ သူက အစ်ကို ဖြစ်တာကြောင့် ညီမဝမ်းကွဲလေးကို တခြားသူတွေဆီက ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုပေမဲ့ ဟန်နာကချည်း သူ့ကိုကာကွယ်ပေးတာပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှက်လားလို့မေးရင်တော့ သူ မရှက်ပါဘူး။ လုံးဝ(လုံးဝ) မရှက်ဘူး!
ဟုတ်တယ်လေ။ သူ မတတ်နိုင်တာကို သူများတတ်နိုင်လို့လုပ်ပေးတာပဲ။ ဘာရှက်စရာရှိလဲ။ ကျေးဇူးတင်လိုက်ရုံပေါ့။ ဒါဆိုဘယ်လောက်များကောင်းသွားလိမ့်မလဲ။ တစ်ခါခါမှာ လူတွေက အခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့ ကျေးဇူးတင်ခြင်းဆိုတာကို မေ့လျော့ကြတယ်။ ဒါကလည်း သူတုိ့အပြစ်တော့မဆိုသာပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မာနက ကျေးဇူးတင်ခြင်းကို မေ့လျော့အောင် လုပ်ခဲ့တာကိုး။ ဒါကြောင့် သူ မလုပ်နိုင်တာကို ဟန်နာလုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ဘာဘာညာညာ သူ မစဉ်းစားဖြစ်ဘူး။ ကျေးဇူးပဲတင်ဖြစ်လိုက်တယ်။
“ငါ Dress အသစ်ချုပ်ပြီးသွားပြီ… အလုပ်စကြမယ်… ဒီပိတ်ရက်မှာ…”
ယွန်းချီရဲ့မျက်နှာမှာ မမြင်ရတဲ့အနက်စင်းတွေထင်လာတော့တယ်။ သူ မိန်းကလေးလို ထပ်ဝတ်ရဦးမယ်။ ဘာလို့များ သူ့အမေကသူ့ကို ဘာဝတ်စုံဝတ်ဝတ်လှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေးခဲ့တာလဲ။ နောက်ပြီး ယောကျာ်းမကျ မိန်းမ မကျတဲ့မျက်နှာကိုလည်း ပေးထားသေးတယ်။
ယွန်းချီခပ်အေးအေးပဲ ‘အင်း’ လိုက်တယ်။ ဒီအလုပ်က သူနဲ့အသားကျနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့စိတ်ထဲ မိန်းကလေးလို ဝတ်ရမယ်ဆိုတာကို တွေးမိပြီး နည်းနည်း အောင့်သက်သက်ဖြစ်တာကလွဲရင် သိပ်တော့ ထူးထွေမခံစားရတော့ပါဘူး။
အန္တရာယ်များလိုက်တာ! သူ မိန်းကလေးလို ဝတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလေးမှ ကသိကအောက် မခံစားရတော့ဘူး! ဒါ အရမ်းကို အန္တရာယ်များတာပဲ!
ဟန်နာနဲ့သူနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာပေါက်တတ်ရာရာပြောရင်းကနေ ဟန်နာက အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို သတိရသွားတဲ့ပုံနဲ့အသံပြုတယ်။ ပြီးတော့မှ…
“အိုး… အစ်ကို… နင် သူငယ်ချင်းအသစ်ရနေတယ်ဆို… အန်တီပြောတာ…”
သူငယ်ချင်းအသစ်ဆိုတာက ယွန်းချီရင်ကို တဒိတ်ဒိတ်ခုန်သွားစေတယ်။ သူငယ်ချင်းအသစ်…
“အဲ့ဒီကောင်လေးက နင့်ကိုအနိုင်ကျင့်မှာကို သူ စိုးရိမ်တယ်လို့ပြောနေတာ…”
ယွန်းချီရဲ့မိဘတွေက ခန့်ဝေသော်နဲ့သူ အပေါင်းအသင်းလုပ်နေတာကို သိပုံရတယ်။ မြို့လေးကလည်း ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်တာကြောင့် လူကြီးတွေအနေနဲ့ ရှိတဲ့ကလေးနည်းနည်းလေးရဲ့ အကြောင်းတွေကို သိဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မခဲယဉ်းလှပါဘူး။
“သြော်… အဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးတာပဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး သူ အနိုင်ကျင့်ရင်တော့ ငါ့ကိုပြောနော်…”
“ငါတို့ကျောင်းက ငါ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကို ခေါ်ပြီး အဲ့ကောင်ကိုထိုးခိုင်းမယ်… အနာဆုံး ထိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကို ငါနဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ရက် ဒိတ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်လေ…”
ယွန်းချီရုတ်တရက် ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ သူ့ညီမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကို အခြားသူတစ်ယောက်ကို အသုံးချဖို့အတွက် အကြံအကြီးကြီးရှိနေတယ်။
“ဘာလဲ ငါမှ ရန်မဖြစ်တတ်တဲ့ဟာ…”
ဟန်နာရဲ့ဖုန်းထဲက ဆောင့်ဆောင့်လေးထွက်လာတဲ့အသံက တစ်ဖက်မှ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက ရှေ့ကို စုချွန်ပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။
“ကိုယ်မလုပ်နိုင်လို့ လုပ်နိုင်တဲ့လူကို အသုံးချတာ ဘာဖြစ်တာမှတ်…”
“ကောင်လေးတွေနဲ့ မပတ်သက်ပါနဲ့ နင်က ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာ…”
၁၅ နှစ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်လေးပါ။ တကယ်ငယ်ငယ်လေး။
“အမလေး မပတ်သက်ပါဘူး… ငါ ဘယ်သူနဲ့မှ ဒိတ်ဖို့မစဉ်းစားဘူး…”
ဟန်နာက ခပ်မြန်မြန်အော်တယ်။ နောက်တော့ သူမလေးက ဆက်ပြောလာတယ်။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… သူက လူရမ်းကားလေးလို့ အန်တီကပြောတယ်… အဲ့ဒါကြောင့် နင် အဲ့ဒီလူရမ်းကားလေးနဲ့ ဆက်ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင် အစ်ကိုကြီး နင် Roll No. တော့ ကျလို့မဖြစ်ဘူး…”
သူ့အစ်ကိုကြီးမှာ အပေါင်းအသင်းက များများစားစားမရှိတာကြောင့် ဟန်နာကတော့ ယွန်းချီအမေလိုမျိုး ယွန်းချီကို ဟိုလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့တော့ မပြောချင်ဘူး။ ဘာလို့ဆို ယွန်းချီမှာ ယောကျာ်းလေးအပေါင်းအသင်းထက် မိန်းကလေးအပေါင်းအသင်းက ပိုများတယ်လေ။ ပြောရရင် အဲ့လူရမ်းကားလေးက လတ်တလောမှာရှိတဲ့ ယွန်းချီရဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော ယောကျာ်းလေး အပေါင်းအသင်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး လူရမ်းကားလည်း ဘာဖြစ်လဲ။ လူရမ်းကားမှာလည်း အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ အဲ့ဒီလူရမ်းကားလေးက ရပ်ကွက်ဗိုလ်မျိုးဆို ဘယ်ကောင်မှ ကိုယ့်မထိရဲတော့ဘူးလေ။ ဟင်း…ဟင်း ပြောပါတယ် အသုံးဝင်ပါတယ်ဆို။ ဟန်နာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ရယ်လိုက်တယ်။
“အင်း ငါ သိတယ်…”
ယွန်းချီက လေပျော့လေးနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ယွန်းချီရဲ့မိဘတွေက ယွန်းချီကို တော်တန်ရုံမချုပ်ချယ်ကြဘူး။ ယွန်းချီရဲ့ အဆင့်သာမကျဘူးဆိုရင် သူတို့ဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ ဟန်နာက သူ့ကို ဒါကို သတိရအောင် ပြောပေးနေတာ။ ဟန်နာတစ်ယောက် သူ့ဘေးမှာရှိတာ ကျေးဇူးတော့တင်ရမယ်။ မဟုတ်ရင် သူ ဘယ်လိုမှ ဒီလိုအချက်တွေကို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ပြောပြီးတာနဲ့ ဟန်နာက နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထပ်ပြောင်းတယ်။
“ငါဒီတစ်ခါရိုက်ကွင်းကို လိုက်အောင် ပြောင်းထားတယ်…”
“အခု ဂါဝန်က gothic style ဆိုတော့ နင်နဲ့လိုက်မှာပါ… နင့်ညှပ်ရိုးလေးတွေက တအားလှတယ်လေ…”
ဟန်နာနဲ့သူနဲ့ ဆက်ပြောကြတယ်။ အမြဲတမ်း ယွန်းက နတ်သမီးဆန်ဆန်ဖြူဖြူလေးလှနေတာကို visual change ပြီး အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟန်နာက အားတက်သရောပြောပြတယ်။ ယွန်းချီကတော့ နားထောင်သက်သက်ပေါ့။ သူက ဘိုမရုပ်လေးပဲလုပ်မယ်။ ဟန်နာဝတ်ပေးတာဝတ်မယ်။ ဟန်နာ နေခိုင်းသလိုနေမယ်။ ဟန်နာပြင်ပေးတာကို ငြိမ်ခံမယ်။ ဟန်နာက အဲ့ဒီပိုင်းမှာ ငယ်ပေမဲ့ talent ရှိတယ်ဆိုတာ သူ ကောင်းကောင်းသိတယ်လေ။ ဒါကြောင့် သူ ဟန်နာ့ကို ယုံလိုက်တာပဲ ကောင်းတယ်။
“ဒါဆို ငါတို့ ပိတ်ရက် ၁၀ နာရီနော်…”
နောက်ဆုံးတော့ ချိန်းဆိုမှုကြီးက အတည်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ဟန်နာနဲ့ဖုန်းပြောပြီးချိန်မှာ ယွန်းချီရဲ့အတွေးတွေက တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့။ ပထမဆုံး ခန့်ဝေသော်နဲ့ကိစ္စတွေရှုပ်နေခဲ့တာကြောင့် သူက ယွန်းဆိုတာကို ယွန်းချီမေ့နေခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူ အဲ့ဒီအလုပ်ကို လုပ်ရဦးမယ်။ သူက ယွန်းဆိုမှ… ခန့်ဝေသော်က သူနဲ့တွဲရင် တိတ်တိတ်လေးနေပေးမယ်လို့ပြောတယ်။
ဒါက ခန့်ဝေသော်က သူ့ကိုချစ်တာလား မချစ်တာလား။ ချစ်တာလားမချစ်တာလားဆိုတာကလည်း ပါးစပ်ကပြောမှ သိမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ သူက အကြားအမြင်ဆရာလည်းမဟုတ်၊ စိတ်ဖတ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။
ခန့်ဝေသော်က သူ့ကိုချစ်တာလား၊ မချစ်တာလားဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ယွန်းချီတစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အုန်းမှုတ်ခွက်လေးပြန်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ သူ တကယ်မသိဘူး ခန့်ဝေသော်က သူ့ကိုချစ်တာလား၊ မချစ်တာလား။ စိတ်ဆိုးလို့ သူနဲ့တွဲပြီး သူ့က ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပါလို့ အရှက်ခွဲမှာလား။
ဒီအတွေးက ယွန်းချီရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးကို အေးစက်တောင့်တင်းသွားစေတယ်။
မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ခန့်ဝေသော်က အဲ့လိုမျိုးလုပ်မဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။
ခန့်ဝေသော်က လုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခန့်ဝေသော်က… ခန့်ဝေသော်က လူကောင်းလေးဆိုတာကို သူ သိတာကြောင့် မလုပ်လောက်ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီညကတစ်ညလုံး ယွန်းချီတစ်ယောက် Repeat ပြန်လှန်နေတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အိပ်ပျက်ခဲ့ရတယ်။
တစ်ရက်လေးအိပ်ပျက်လိုက်တာနဲ့ မျက်တွင်းလေးချိုင့်လာတဲ့ ယွန်းချီရဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး ခန့်ဝေသော် အံ့သြတကြီးမေးတယ်။ ယွန်းချီကတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အယောင်မကျသေးတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့…
“ဘာလို့ အဲ့လောက်ကြီး ရန်ဖြစ်လာရတာလဲ…”
ခန့်ဝေသော်အခုလိုဒဏ်ရာရနေတာကို မြင်ရတာ သူ့စိတ်က လုံးလုံးမချမ်းသာဘူး။ ခန့်ဝေသော်နာတာက သူ နာတာမဟုတ်ပေမဲ့ သူနာသလိုပဲ ခံစားနေရတယ်။ လူကနာတာမဟုတ်ဘဲ စိတ်ကနာတာကြောင့် သူခံစားရတာက ပိုဆိုးလောက်တယ်လို့ ယွန်းချီထင်တယ်။
“သြော်… မနာပါဘူး… လက်တွေ့ပြလို့ရတယ်…”
ခန့်ဝေသော်က သူ့မနက်စာ ပေါင်မုန့်ကိုကိုက်ပြီးတော့ ယွန်းချီလက်ကို ကောက်ဆွဲလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက်အပြုအမူက ယွန်းချီကို မျက်လုံးတွေဝိုင်းစက်သွားစေတာပေါ့။ ယောင်ကိုင်းနေတဲ့မျက်နှာကို ယွန်းချီလက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေ ထိလာတယ်။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီမျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်တယ်။ နောက်တော့ ပေါင်မုန့်ကို ကိုက်ထားရင်းကနေ ပြုံးတယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အဲ့လိုအပြုံးက ခွေးလေးတစ်ကောင်က မုန့်အိတ်လေးကိုက်ပြီး ပြုံးလိုက်သလိုပဲ။ ယွန်းချီကတော့ အဲ့လိုပဲ မြင်တယ်။ ပွန်းချိကို မြင်ယောင်လိုက်တာကြောင့် ယွန်းချီရဲ့လက်တွေက ခန့်ဝေသော်လက်ကနေထွက်ပြီး အလိုလို ခန့်ဝေသော်ခေါင်းဆီရောက်သွားတယ်။ ဒါ ပွန်းချိကို အသဲယားလာတိုင်း သူ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူပါပဲ။
“နောက်တစ်ခါ ရန်အများကြီး မဖြစ်နဲ့…”
ယွန်းချီရဲ့အသံတိုးတိုးလေးက ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ရင်ထဲကို ချောကလက်ကော်ဖီပူပူလေး လောင်းထည့်လိုက်သလိုပါပဲ။ နွေးလည်းနွေးတယ်။ ချိုလည်းချိုတယ်။
ပေါင်မုန့်ကိုက်ရင်းနဲ့ သူ ခေါင်းညိတ်တယ်။ ပေါင်မုန့်ကိုက်ထားတာကြောင့် သူ့ ‘အင်း’ ဆိုတဲ့အသံက မပီမသနဲ့ပေါ့။
အာ… သူ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ပါးတွေကို ဆွဲညှစ်ချင်လိုက်တာ… ယွန်းချီစိတ်ထဲမှာ တွေးနေတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ ခန့်ဝေသော် ဆံပင်ထောင်ထောင်လေးတွေကို ထိပြီးတော့ သူ လက်မြန်မြန်ရုတ်လိုက်ရတယ်။ တော်သေးတယ်! ခန့်ဝေသော်က ငါ့ကို ထမထိုးလို့!
ယွန်းချီစိတ်ထဲရင်မနေပြန်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ သူ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ခေါင်းကို ဖတ်ခနဲမပြောမဆိုနဲ့ကိုင်လိုက်တာကို။ မျက်ထောင့်လေးကပ်ပြီး ခန့်ဝေသော် စိတ်ဆိုးနေလား မဆိုးနေလား အကဲခတ်ပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်က ခပ်အေးအေး ပေါင်မုန့်စားနေလေရဲ့။
“မနက်စာကို ငါ လုပ်လာပေးရမလား…”
ယွန်းချီတိုးတိုးလေးမေးတယ်။ ပေါင်မုန့်တွေ နေ့တိုင်းစားတာ မကောင်းဘူးလေ။
“မင်း စားချင်တယ်ဆို ငါ နေ့လည်စာပါ နှစ်ယောက်စာ လုပ်လို့ရတယ်…”
ခန့်ဝေသော် ပေါင်မုန့်သီးသွားတော့တယ်။ သူ မြိုချနေတုန်းမှာ ယွန်းချီပြောလိုက်တာကြောင့်လေ။ အရမ်းကိုအံ့သြသွားတာကြောင့် ပေါင်မုန့်က သူ့လည်ချောင်းမှာတစ်သွားခဲ့တယ်။ ပြန်မဖြေတာကြောင့် ယွန်းချီကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ခန့်ဝေသော်ရဲ့မျက်နှာနီနီကိုတွေ့တယ်။ ရှက်လို့နီတာထက် ပေါင်မုန့်က လည်ချောင်းမှာ တစ်နေလို့ နီနေတာပါ။ ရင်ဘတ်ထုနေတဲ့ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်ပြီး ယွန်းချီ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို နားလည်လိုက်တယ်။
ခပ်မြန်မြန်ပဲ ခန့်ဝေသော် သူ့အတွက်ဝယ်လာပေးတဲ့ စတော်ဘယ်ရီနို့အေးစက္ကူဘူးကို သူ ပိုက်နဲ့ဖောက်ပြီး တိုက်လိုက်တယ်။ အအေးဝင်သွားတော့မှပဲ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ နီနေတဲ့ မျက်နှာက အရောင်ကျသွားတော့တယ်။
“မင်း မလုပ်စေချင်လည်း ပြောလို့ရပါတယ်… အဲ့လောက် လန့်သွားစရာမလိုပါဘူး…”
အအေးဆက်သောက်နေတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို မကြည့်ဘဲ ယွန်းချီစိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ပြောတယ်။
ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် အအေးတောင် မမြိုချနိုင်တော့ဘူး။ အလောတကြီးပြန်ပြောလိုက်တာကြောင့် ပါးစပ်ထဲက အအေးတွေက သူ့ပေါင်ပေါ်ကျသွားတော့တယ်။
ခန့်ဝေသော် : ………
ယွန်းချီ : ………
သူတို့ တခဏတိတ်သွားကြတယ်။ ကသောင်းကနင်းဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး တဟားဟားနဲ့ထရယ်ကြတော့တာပေါ့။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို ကြည့်ပြီးတော့…
“တကယ်တော့ ငါအရမ်းပျော်သွားတာပါ မင်းက ငါ့ကို မနက်စာလုပ်ပေးမှာလေ…”
ရယ်ပြီးခဏကြာတဲ့အချိန်မှာ ခန့်ဝေသော်ပြောတယ်။ ယွန်းချီကို သူ ကြည့်တဲ့အကြည့်က ရွှန်းရွှန်းစားစားပါပဲ။ ယွန်းချီ ခေါင်းလေးငုံ့သွားခဲ့တယ်။ ခန့်ဝေသော် စိတ်ထဲမှာ မချင့်မရဲနဲ့။ ဒုက္ခပဲ ခေါင်းငုံ့နေတဲ့ ယွန်းချီကို သူ ဖက်လိုက်ချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ နမ်းလိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ လုပ်လို့မရဘူး! ဒါက ကျောင်းပရဝဏ်ထဲမှာလေ! လုပ်လိုက်ရင် သူ့ဦးလေးက သူ့ကို အသေလုပ်သတ်လိမ့်မယ်!
“ငါတို့ ဒီပိတ်ရက် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမလား…”
ခန့်ဝေသော် တိုးတိုးလေးမေးတယ်။ တကယ်လို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ယွန်းချီရဲ့လက်တွေကို သူကိုင်လို့ရလောက်တယ်။ နောက်ပြီး အခွင့်အရေးပေးရင် ပခုံးလေးဖက်မယ်။ အခွင့်အရေးထပ်ပေးလာရင်… ယွန်းချီကို သူ နမ်းချင်တယ်။ ယွန်းချီရဲ့ လက်ကလေးတွေက အိအိလေး။ ပခုံးကိုသာ ဖက်ပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ရင် ယွန်းချီဆီက ဘယ်လိုအနံ့မျိုးကို သူ ရလိမ့်မလဲ။ ယွန်းချီသုံးနေကျ ရေမွှေးနံ့? ယွန်းချီရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကရော အိစက်နေမလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုအရသာမျိုးရှိလိမ့်မလဲ… လူဆိုးလေးတစ်ယောက်က သူ့အတွေးနဲ့သူ မျက်နှာလေးရဲသွားတယ်။
ယွန်းချီကတော့ လူဆိုးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးကို မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ့စိတ်ထဲ ပိတ်ရက်မှာ ဟန်နာနဲ့ကတိပေးထားတာကို တွေးနေတယ်။
“ငါ အဲ့နေ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းရှိတယ်…”
ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အသံက မျှော်လင့်တကြီးပေါ့…
“ငါ လိုက်ကြည့်လို့ရမလား… ငါက မင်းရဲ့ဖန်ပါ! မင်းက ငါ့ရဲ့ နံပတ်တစ်ပဲ!”
ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မျက်နှာလေးက ပွန်းချိအစာတောင်းနေတဲ့ပုံလေးနဲ့တူတယ်။ ခန့်ဝေသော်ခေါင်းပေါ်မှာ နားရွက်နဲ့ အနောက်က အမြီးတောင် ထွက်လာသလိုပဲ။ အမြီးလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ ပွန်းချိအစာတောင်းနေတဲ့ပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ယွန်းချီရယ်တော့တယ်။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို အရှက်ခွဲမယ်? ဘယ်လိုတွေတောင် သူ အတွေးတိမ်ခဲ့တာလဲ။
သူ ရယ်ပြီးခေါင်းညိတ်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က ဘယ်တော့မှ လုပ်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ ဒါကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ သူ ယုံလည်းယုံတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ ယွန်းချီဘာလို့ ရယ်လည်း နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ယွန်းချီရယ်နေတာကိုပဲ သူ ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ရယ်နေတဲ့ယွန်းချီကို သူ သဘောကျတယ်။ ဟင့်အင်း ယွန်းချီ ဘယ်လိုနေနေ သူ သဘောကျတာပါ။ ဟုတ်တယ် အမှန်က ဒီလိုပါ။ ယွန်းချီဘယ်လိုနေနေ သူ သဘောကျတာ။
MaskMelon 20.12.2019, 12:41 5
MeMo227 19.12.2019, 07:33 5
Yun Ji 17.12.2019, 06:03 5